IBay Beach Villa, igumbi leNqanaba leSibini - I-Airbnb
IBay Beach Villa, igumbi leNqanaba leSibini
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguBenoit
Igumbi laBucala le-En Suite kuMgangatho wokuQala weVilla enkulu elunxwemeni eGrand Bay.
Igumbi libucala kakhulu, lineengcango ezinkulu ezityibilikayo ezinombono omhle wolwandle ukusuka ebhedini yakho. Ichibi lokuntywila leVilla yabucala kunye nedama elikhulu elidityanelweyo, kunye nolwandlekazi lwaseIndiya kuphela kumgama weemitha ezingama-20 nolwandle olunesanti emhlophe.
Igumbi ke ngoko kumgangatho wokuqala weVilla ofikeleleka ngokulula ukusuka kwindawo yokungena yoluntu kunye nezinyuko zokubhabha. Igumbi libucala kakhulu kwaye lizolile kunye nechibi lokuntywila labucala ekwabelwana ngalo zezinye iindwendwe zeVilla, ichibi elikhulu loluntu elinendawo zokuphumla zelanga kunye neambrela, kunye noLwandlekazi lwaseIndiya kumgama weemitha ezingama-20 kuphela.
Olu luhlu oluhlaziyiweyo lwamagumbi eVilla emva kweengxaki kwiakhawunti yokuqala, kwaye abathengi bangaphambili babeneliseke kakhulu. Nceda ujonge ugxeko ncomo kwimifanekiso kunye neereyithingi.
Eli ligumbi lesibini elivulwe kwiVilla ukuze liqeshwe ngumnini, emva kokuba igumbi lokuqala liphumelele kakhulu kwaye lalinophononongo lweenkwenkwezi ezi-5 kuphela.
Igumbi libanzi kakhulu kwaye likumgangatho wehotele, kubandakanya ibhedi eyongezelelekileyo yenkumbulo yenkosi, iwadi enkulu kunye nezitulo ezibini. Igumbi lokuhlambela le-en suite lineshawa enkulu, isinki kunye nendlu yangasese. Eli gumbi likwabandakanya isikhenkcezisi, iketile, isitya sokutya kunye neti nekofu xa ufika. IVilla likhaya likaBenoit kwaye inamagumbi amabini ngaphakathi kweVilla ehlala iiNdwendwe, elinye likumgangatho ophantsi kwaye elinye kumgangatho wokuqala, kodwa omabini abucala. I-Villa ibandakanya isicwangciso esivulekileyo sendawo yokuhlala kunye nekhitshi langoku apho iindwendwe zisebenziseka simahla, kunye nebala elitofotofo elinendawo yokuhlala. I-Villa ikwabandakanya abasebenzi abacoca igumbi lakho imihla ngemihla elibandakanyiweyo kwindawo yakho yokuhlala (ngaphandle kweCawa kunye neholide kaWonkewonke) nangaliphi na ixesha phambi kwe-11am. Igumbi lakho libandakanya ilinen yebhedi ekumgangatho ophezulu kakhulu, i-duvet ephantsi kunye nemiqamelo, iitawuli ezisemgangathweni zokuhlambela kunye neetawuli ezinkulu zaselwandle ezinokusetyenziswa simahla, kunye nefriji yakho kwigumbi.
Igumbi lingaphakathi kwe-4 Bedroom Villa enamagumbi amabini nje asetyenziswa ziindwendwe, elinye lihlala ngokwam umnikazi, kodwa zonke zizimele kakhulu omnye komnye. I-Villa inkulu kwaye igumbi lakho lobuqu liziimitha ezingama-23 zesikwere
Indawo yasekhitshini ekwabelwanayo ngayoNgaphandle kwendawo yokutyela isidlo sabo sakusasa/sasemini/sangokuhlwa saPrivate plunge pool & nequla elikhulu loluntu elinendawo zokuphumla elangeni kunye neeambrela
4.98 · Izimvo eziyi-54
I-Villa ikwindawo esembindini weGrand Bay, ineendawo zokutyela ezingenakubalwa ngaphakathi kwemizuzu yokuhamba, imivalo, ukhenketho lwesiqithi kunye nokuthenga okukhulu.
Ivenkile enkulu ikufuphi kwaye ezinye iilwandle ezintle kakhulu kwisiqithi ngaphakathi kwemizuzu emi-5 yokuqhuba, kunye nolwandle lwabucala kumnyango wakho.
Umbuki zindwendwe ngu- Benoit
UBenoit umamkeli uyafumaneka kwiindwendwe zonke iingokuhlwa xa esekhaya, kwaye abasebenzi bendlu balapha ukunceda imini yonke.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Grand Baie